၂၄ ရက်နေ့မှာ ကြေညာမယ့် Huawei ရဲ့ 5G Foldable Phone | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone ၂၄ ရက်နေ့မှာ ကြေညာမယ့် Huawei ရဲ့ 5G Foldable Phone
Huawei က MWC 2019 မှာ သူ့ရဲ့ 5G Foldable Phone ကို ကြေညာမယ့် နေ့ကို အရိပ်အမြွက် ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ တွစ်တာမှ ပို့စ်ရဲ့ ဓါတ်ပုံမှာ အဲဒီ စမတ်ဖုန်းကို အနီးကပ် ရိုက်ပြထားပါတယ်။ “Connecting the Future “ စာသားကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
ဟွာဝေးက ဆမ်ဆောင်းထက်စောစွာ ခေါက်ချိုးဖုန်းကို ပြသမယ်လို့ သတင်းထွက်ခဲ့ပေမယ့် မဖြစ်လာတော့ပါဘူး။ ဆမ်ဆောင်းက ဒီလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ခေါက်ချိုးဖုန်းနဲ့ Galaxy S10 Series များကို ကြေညာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Come with us to explore #ConnectingTheFuture LIVE from #MWC @GSMA. Are you ready to reveal the unprecedented? #HuaweiMWC #MWC2019 pic.twitter.com/ErPD7eKMh1— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 1, 2019
ဟွာဝေးရဲ့ ခေါက်ချိုး ဖုန်းမှာ 5G ဆက်သွယ်မှု ပါလာနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ 5G ကွန်ယက်များကို နေရာတိုင်းမှာ မသုံးနိုင်သေးပေမယ့် အန်းဒရွိုက် ကုမ္ပဏီများကတော့ စားသုံးသူများကို စွဲဆောင်ဖို့ 5G Phone များကို မိတ်ဆက်နေကြပါတယ်။
ဟွာဝေးက ခေါက်ချိုး ဖုန်း အပြင် P30 Series များကိုလည်း ပြသနိုင်ပါတယ်။ ယခင်နှစ်က P20 Series များမှာ ကင်မရာသုံးလုံးကို စတင် ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာလည်း Mate 20 Pro မှာ ဒီအတွဲအစပ်များကို အဆင့်မြှင့် ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ P30 မှာတော့ ကင်မရာ သုံးလုံး စနစ်ကို အဆင့်မြှင့်ထားနိုင်ပြီး စွမ်းရည်မြင့်မားတဲ့ 7nm Kirin 980 Chipset မောင်းနှင်ထားမှာပါ။
ဟွာဝေးက ဒီလ ၂၄ ရက်နေ့မှာ MWC 2019 Event ကို ပြုလုပ်မှာပါ။ ဟွာဝေးနဲ့ ဆမ်ဆောင်းတို့ဟာ ခေါက်ချိုး ဖုန်းနဲ့ 5G Phone များကို အပြိုင်ထုတ်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ Apple ရဲ့ ဒီနှစ်ထုတ် အိုင်ဖုန်းများမှာလည်း အနောက်ကင်မရာ သုံးလုံး ပါလာနိုင်ပါတယ်။ Apple က လာမယ့်နှစ် အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ခေါက်ချိုး ဖုန်းများကို ပြသမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၂၀ မတိုင်ခင်မှာ 5G Phone ကို ရောင်းချမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၂၄ ရကျနမှေ့ာ ကွညောမယျ့ Huawei ရဲ့ 5G Foldable Phone
Huawei က MWC 2019 မှာ သူ့ရဲ့ 5G Foldable Phone ကို ကွညောမယျ့ နကေို့ အရိပျအမွှကျ ပွောကွားလိုကျပါတယျ။ တှဈတာမှ ပို့ဈရဲ့ ဓါတျပုံမှာ အဲဒီ စမတျဖုနျးကို အနီးကပျ ရိုကျပွထားပါတယျ။ “Connecting the Future “ စာသားကို အသုံးပွုထားပါတယျ။
ဟှာဝေးက ဆမျဆောငျးထကျစောစှာ ခေါကျခြိုးဖုနျးကို ပွသမယျလို့ သတငျးထှကျခဲ့ပမေယျ့ မဖွဈလာတော့ပါဘူး။ ဆမျဆောငျးက ဒီလ ၂၀ ရကျနမှေ့ာ ခေါကျခြိုးဖုနျးနဲ့ Galaxy S10 Series မြားကို ကွညောမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဟှာဝေးရဲ့ ခေါကျခြိုး ဖုနျးမှာ 5G ဆကျသှယျမှု ပါလာနိုငျပါတယျ။ လကျရှိမှာ 5G ကှနျယကျမြားကို နရောတိုငျးမှာ မသုံးနိုငျသေးပမေယျ့ အနျးဒရှိုကျ ကုမ်ပဏီမြားကတော့ စားသုံးသူမြားကို စှဲဆောငျဖို့ 5G Phone မြားကို မိတျဆကျနကွေပါတယျ။
ဟှာဝေးက ခေါကျခြိုး ဖုနျး အပွငျ P30 Series မြားကိုလညျး ပွသနိုငျပါတယျ။ ယခငျနှဈက P20 Series မြားမှာ ကငျမရာသုံးလုံးကို စတငျ ထညျ့သှငျးပေးခဲ့ပါတယျ။ နှဈကုနျပိုငျးမှာလညျး Mate 20 Pro မှာ ဒီအတှဲအစပျမြားကို အဆငျ့မွှငျ့ ထညျ့သှငျးပေးခဲ့ပါတယျ။ P30 မှာတော့ ကငျမရာ သုံးလုံး စနဈကို အဆငျ့မွှငျ့ထားနိုငျပွီး စှမျးရညျမွငျ့မားတဲ့ 7nm Kirin 980 Chipset မောငျးနှငျထားမှာပါ။
ဟှာဝေးက ဒီလ ၂၄ ရကျနမှေ့ာ MWC 2019 Event ကို ပွုလုပျမှာပါ။ ဟှာဝေးနဲ့ ဆမျဆောငျးတို့ဟာ ခေါကျခြိုး ဖုနျးနဲ့ 5G Phone မြားကို အပွိုငျထုတျလုပျဖို့ ကွိုးစားနပေါတယျ။ Apple ရဲ့ ဒီနှဈထုတျ အိုငျဖုနျးမြားမှာလညျး အနောကျကငျမရာ သုံးလုံး ပါလာနိုငျပါတယျ။ Apple က လာမယျ့နှဈ အနညျးငယျအတှငျးမှာ ခေါကျခြိုး ဖုနျးမြားကို ပွသမှာ မဟုတျပါဘူး။ ၂၀၂၀ မတိုငျခငျမှာ 5G Phone ကို ရောငျးခမြှာ မဟုတျပါဘူး။
Previous articleApple နဲ့ ငြိသွားတဲ့ Facebook
Next articleဆမ်ဆောင်းရဲ့ ခေါက်ချိုးစမတ်ဖုန်းကို ဗွီဒီယိုတစ်ခုတွင် တွေ့မြင်ရ